Ajaaniib muddo dheer ku afduubnaa gudaha Soomaaliya oo la sii daayey | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Ajaaniib muddo dheer ku afduubnaa gudaha Soomaaliya oo la sii daayey
Sida uu Wakaaladda Reuters u sheegay la taliye sare oo dhanka dembiyada ka dhaca baddaha ah, saddex nin oo u dhalatay dalka Iiraan oo u afduubnaa burcad-badeed Soomaali ah tan iyo sanadkii 2015 ayaa la sii daayay.
Raggan ayaa ahaa shaqaalihii ugu dambeeyay ee saarnaa markabka kalluumeysiga FV Siraj ee Iiraan laga leeyahay, kaasoo ay qabsadeen 22-kii March, 2015.
Qofkii afaaraad ee shaqaalaha ka tirsanaa ayaa la sii daayay sanadkii hore, maaddaama uu u baahnaa daryeel caafimaad oo degdeg ah ka dib markii uu xanuunsaday.
John Steed oo ah sarkaal ciidamada Britain ka tirsanaa, isla markaana sanado ku bixiyay dadaalka sii deynta dadka ay burcad-badeedda ku afduubtaan Soomaaliya, ayaa sheegay in raggan la sii daayay Sabtidii la soo dhaafay, haatanna ay ku sugan yihiin dalka Itoobiya oo ay ku sugayaan baaritaanka coronavirus kaddibna ay dalkooda u safri doonaan.
“Tani waxay soo afjareysaa muddadii burcad-badeedda Soomaalida iyo xanuunka ay dareemaan dadkii lagu afduuban jiray Soomaaliya ee la iska illaabay,” ayuu yiri John Steed oo aan faahfaahin ka bixin in sii deynta raggan lagu bixiyey madax furasho iyo in kale.
Previous articleDowlada Somalia oo faahfaahisay duqeyn lagu dilay Sarkaal ka tirsan Al-Shabaab
Next articleForeigners abducted in Somalia released
Ciidamada Saciid Dani oo Dhoolatus yaab leh ka dhigay magaalada Muqdisho
Maxaa ka Jira Degmada Dayniile